माघेसङ्क्रान्ति पर्वको चहलपहल बढ्दै, यसरी घरमै बनाउनुहोस् चाकु !
Thu, Dec 12, 2019 at 11:45am
पर्व नजिकिँदै गर्दा थारु र मगर बस्तीमा टाढाटाढा काममा गएकाहरु घर आउने क्रम जारी
शनिबार, २८ पौष २०७५,	आहाखबर	1.19K
बर्दिवास, २८ पुस
माघेसङ्क्रान्ति नजिकिएसँगै महोत्तरी जिल्लाका आदिवासी थारु जाति र मगर बस्तीमा चहलपहल बढेको छ । पर्वको तयारीमा अन्य जातजाति पनि लागे पछि यसलाई मुख्य पर्व नै मान्ने तराईका आदिवासी थारु र मगर बस्तीमा माघसङ्क्रान्ति पर्वको रौनक छाएको हो ।
कसरी बनाउने चाकु ?
सखरमा केही पानी मिसाई उम्माल्ने केही समय राम्रोसँग पकाएपछि त्यसलाई खुल्ला भाँडोमा खन्याउने। केही बेर त्यतिकै राखेपछि त्यसलाई राम्रोसँग फिट्ने। जबसम्म त्यसको रंग फरक हुँदैन त्यतिञ्जेल फिट्ने । फिटेपछि त्यसमा आफूलाई चाहिने मात्रामा काजु, नरिवल, किसमिस लगायतका मसलाहरू मिसाउने र एकछिन् त्यतिकै खुल्ला छोडिदिने।